छोरी र बुहारीले काँध हाले, जेठी बुहारी शाेभाले दिइन दागवत्ती – Gorkha Sansar
in धर्म संस्कृति, मुख्य समाचार, समाज, हेडलार्इन
हिन्दू धार्मिक संस्कारमा छोराले मात्र मरेपछि पानी दिनुपर्छ, छोरी बुहारीले दागबत्ती दिनुहुँदैन भन्ने रुढिबादी परम्परालाई गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिका नगरपालिका वडा नं. ८ का गीता र शोभाले तोडेका छन् । हिन्दू परम्पराअनुसार छोरा र छोरी समान हुन भन्ने भनाइलाई उनीहरुले व्यवहारमा उतारेर देखाएका छन् ।
आज करीब ४ बजेतिर धुवाँकोट गाैलीटारका करीब ७७ बर्षीय हिमलाल पन्थको निधन भयो । पन्थ विगत केही वर्षअघिदेखि प्रेशर, सुगर र किडनीको समस्याबाट थलिएका थिए । २ छोरा र ३ छोरीका बाबु पन्थको निधनपछि छोराहरु घरमा नभएको अवस्थामा कसले काँध हाल्ने कसले दागबत्ती दिने भन्ने बहस हुनुभन्दा पहिले नै छोरीहरु गीता उप्रेती र ज्ञानी ढकालले काँध हाले । अन्त्येष्टिस्थलमा पुगेपछि जेठी बुहारी शोभा पन्थले दागबत्ती दिइन् । जेठो छोरा प्रकाश पन्थ केही बर्षअघिदेखि घरको सम्पर्कमा नरहेको र कान्छो छोरा प्रदिप पन्थ पनि रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका छन् ।प्रदीप घर फर्कनको लागी २ दिन अघि नै टिकट काटेर तयारी अवस्थामा रहेपनि त्यहाँको प्रावधानका कारण आफू भोली मात्र आइपुग्ने बताए ।
हिन्दू संस्कारमा छोराले मात्र दागवत्ती दिनुपर्छ भन्नेहरुलाई गतिलो झापड प्रहार गरी देखाएकी छन बुहारी शोभाले । नारी पुरुष समान, छोराछोरी बराबर भन्ने कुरालाई नारामा मात्र होइन व्यवहारमा पनि उतारेर देखाउनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ आफूले दागवत्ती दिएको बताउँछिन शोभा । महिलाहरूले देखाएकाे यस्ताे शाहस प्रति अाफूले उच्च रूपमा लिएकाे वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष शंकरराज कंडेलले बताउनुभयाे । साथै यसले चेतना बढाउने समेत बताउनुभयाे । यसरी सवै क्षेत्रबाट उदाहरणीय रुपमा अघि बढेमा बल्ल नारी पुरुष समान, छोराछोरी बराबर भन्ने नाराले सार्थकता पाउला ।
सत्रसयमा ३ जना लाई खुकुरी हानी फरार रहेका दमौलीका श्रेष्ठ ११ महिना पछी पक्राउ
अबदेखि ६ वर्ष देखि १२ सम्मका बालबालिकाले पनि फुटबल खेल्ने